Barcelona oo saddexda dhibcood ka soo qaadatay kooxda Real Betis oo ay booqatay… +SAWIRRO – Gool FM
Barcelona oo saddexda dhibcood ka soo qaadatay kooxda Real Betis oo ay booqatay… +SAWIRRO
Dajiye February 7, 2021
(Spain) 08 Feb 2021. Barcelona ayaa guul ka soo heshay kooxda Real Betis oo ay ku booqatay garoonkeeda Reale Seguros, kadddib markii ay kaga soo adkaatay 2-3, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada horyaalka La Liga.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hoggaamineysay kooxda kubadda cagta ee Real Betis.
Daqiiqadii 38-aad kooxda kubadda cagta ee Real Betis ayaa hoggaanka u qabatay dheesha waxaana 1-0 ka dhigay Borja Iglesias, kaddib markii uu caawinta goolkan ka helay saaxiibkiis Emerson.
59 daqiiqo marka ay ciyaartu aheyd Barcelona ayaa dhalisay goolka barbardhaca, kaddib markii uu 1-1 ka dhigay Lionel Messi, oo caawin ka helay xiddiga reer France ee Ousmane Dembele.
Daqiiqadii 68-aad Barcelona ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta kaddib markii uu gool iska dhaliyay xiddiga kooxda Real Betis ee Victor Ruiz, dheesha ayaa sidaas ku noqotay 1-2.
Laakiin 75 daqiiqo marka ay ciyaarta aheyd kooxda martida loo ahaa ee Real Betis ayaa heshay goolka barbardhaca waxaana 2-2 ka dhigay Victor Ruiz oo caawin qurux badan ka helay Nabil Fekir.
87 daqiiqo Trincao ayaa markale hoggaanka u dhiibay kooxda Barcelona wuxuuna dheesha ka dhigay 2-3.
Ugu dambeyntii ciyaarta aya ku dhamaatay 2-3 ay ku adkaatay kooxda Barcelona oo marti ugu aheyd naadiga Real Betis garoonkeeda Reale Seguros. Barca ayaa haatan ku jirta booska 2-aad ee dhanka kala sareynta horyaalka Spain inkastoo ay min 43 dhibcood wadaagaan Real Madrid oo 3-aad fadhisa.
Chelsea oo guul ka soo heshay kooxda Sheffield United oo ay booqatay… +SAWIRRO
Lionel Messi oo labo daqiiqo gool ku dhaliyey markii uu xalay kursiga keydka ka soo kacay, una sii dhowaanaya Suarez